DeFi - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘဏ္Financeာရေး၊ အရင်းအမြစ်ဘဏ္Financialာရေးဂေဟစနစ် | Linux မှ
မနေ့ကစိတ်ဝင်စားစရာ application သုံးခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် dual-ရည်ရွယ်ချက်, ထိုသူတို့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည် လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး y ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေစနစ် နှင့် နည်းပညာ Blockchain။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပါမည် Defy o ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္Financeာရေးယင်းသည်အလွန်သွယ်ဝိုက်သောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် DeFi တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ် open source ဖြစ်ပြီး ကြောင်းမကြာသေးမီတဝိုက်ဖြစ်ပျက်နေသည် blockchain နည်းပညာ အပေါ် ဘဏ္ဍာရေးကမ္ဘာကြီး, နှင့်ကြောင့်မြင့်တက်မှုကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုအားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ် Cryptocurrenciesနှင့်လိုအပ်ချက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေစနစ်များ y ဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအ ပိုမိုစိတ်ချရသော၊ ပိုမြန်၊
အနည်းငယ်သောအခါသမယများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်။ ထိမိပါပြီ Cryptocurrencies, Blockchain နှင့် FinTechဤအရာအလုံးစုံကတည်းက နည်းပညာသစ်များ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံသည် free software y ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်.
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ် Defy ပိုမကြာသေးမီအရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အစောပိုင်းပို့စ်များကိုလေ့လာလိုသူများအတွက် Cryptocurrencies, Blockchain နှင့် FinTech မင်းကိုအောက်ပါထားခဲ့ပါ
"ဘဏ္Technာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများ (Technologies Finance) သို့မဟုတ် FinTech ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့်အယူအဆမှာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများဖြစ်သော "Financial Technologies" ၏အတိုကောက်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များဖန်တီးရန်နှင့်ရောင်းရန်မည်သည့်ကဏ္ in (ဘဏ္financialာရေး၊ စီးပွားဖြစ်၊ နည်းပညာနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ဆောင်မှု) တွင်မဆိုအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ (ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ) အသုံးပြုသောခေတ်မီနည်းပညာအားလုံးကိုအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။" Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies: သူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
1 DeFi - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘဏ္Financeာရေး
1.1 DeFi ဆိုတာဘာလဲ
1.2 DeFi နှင့် Open Source
1.3 ပိုမိုသိရှိရန် ...
DeFi - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘဏ္Financeာရေး
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, အသုံးအနှုန်းမကြာခဏရှုပ်ထွေးသည် FinTechဟူသောဝေါဟာရကိုနှင့်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တယ် Defy, ငါတို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပါလိမ့်မယ် အတိုချုပ်, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
"«ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္Financeာရေး»အတွက်အတိုကောက်။ DeFi ဆိုသည်မှာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသူမည်သူမဆို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကြားခံမရှိဘဲ blockchain မှကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်ရည်ရွယ်ထားသော DApps (ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းဆိုင်ရာအသုံးချခြင်း) အမျိုးအစားများကိုလွှမ်းခြုံသောအယူအဆနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းပညာဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ" Fuentes.
စဉ်တွင်, ကျယ်ပြန့်, သင်နှင့်ပတ်သက်။ အရေးအပါဆုံးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် Defy, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
"ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကိုဖန်တီးရန်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်ကွန်ရက်များနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအားပေးသည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု။ စိတ်ကူးမှာဘဏ္DAာရေး DApps ကိုခွင့်ပြုချက်မရသော blockchains နှင့်အခြား peer-to-peer (P2P) protocols များကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုမရှိသောမူဘောင်တစ်ခုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် DeFi ၏အရေးကြီးဆုံးရည်မှန်းချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအနက်ငွေဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများဖန်တီးပေးခြင်း၊ အုပ်စုတူအဆင့်တူအချင်းချင်းသို့မဟုတ်စုပေါင်းငွေချေးခြင်းနှင့်ချေးငှားခြင်းပလက်ဖောင်းများနှင့် DEX၊ တိုကင်ပလက်ဖောင်းများ၊ အနကျအဓိပ်ပါယျနှင့်ဟောကိန်းများ။" Fuentes.
DeFi နှင့် Open Source
အများကြီးအကြောင်းကိုပြောနိုင်ပါတယ် Defyသို့သျောလညျး, ကြှနျုပျတို့သညျဤinရိယာ၌အထူးပြုဘလော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အထူးသ၏စကားပြော Defy y ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အောက်ပါမှတ်ချက်ဖြင့်အဆုံးသတ်သင့်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရနိုင်သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ လုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့် သူကငါတို့ကိုဘာပေးသလဲ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် နည်းပညာဆိုင်ရာ, ဒါပေမယ့်ဘဏ္takenာရေးမှခေါ်ဆောင်သွား:
အ Defy como "ပွင့်လင်းသောဘဏ္ecာရေးဂေဟစနစ်" အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတစ် ဦး အပေါ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ခွင့်ပြုပါ မင်္ဂလာပါ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များအရပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ နေစဉ် FinTech ပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်သောရန်ပုံငွေများကိုကတိပေးမည်။ Defy တစ် ဦး မှကျေးဇူးတင်ပါသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပူဇော် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး ၏အပြည့်အဝအလားအလာမှတဆင့်ဖြည့်စွက် blockchain နည်းပညာ.
ဤသည်, အလှည့်အတွက်ကိုလည်းအားပေးတယ် DApps developer များ ဖန်တီးရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည် အသစ်သောဘဏ္financialာရေးထုတ်ကုန်မွေးစားနေစဉ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် protocols များ မှတဆင့်လုပ်ကိုင်ရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချလဲလှယ်ရေးပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောဘဏ္financialာရေးထုတ်ကုန်အသစ်များဖန်တီးရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
ကြွင်းသောအရာများအတွက်, သင်ကအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်2အသုံးဝင်သောနှင့်ပညာရေးအခမဲ့အကြောင်းအရာ အပေါ် Defy အဘယ်သူ၏သတင်းရင်းမြစ်2ဖြစ်ကြသည် အွန်လိုင်းပညာရေးပလက်ဖောင်း Cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် Blockchain နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်လူသိများသည်။ link ကို 1 y link ကို 2.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «DeFi o Finanzas Descentralizadas»ဒါကတစ် နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ် open source ဖြစ်ပြီး ကြောင်းမကြာသေးမီတဝိုက်ဖြစ်ပျက်နေသည် blockchain နည်းပညာ အပေါ် ဘဏ္ဍာရေးကမ္ဘာကြီး, နှင့်ကြောင့်မြင့်တက်မှုကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုအားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ် Cryptocurrencies; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » DeFi - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘဏ္Financeာရေး၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ငွေကြေးဂေဟစနစ်
ကိုယ့် xD မရှိဘူး ဟုသူကပြောသည်
"open source", "open source" နှင့်ထိုကဲ့သို့သော clickbait ကြော်ငြာတန်ချိန်များနှင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများမြှင့်တင်သောဆောင်းပါးများအကြားတွင်လုံးဝမပြောပါနှင့်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏မျက်နှာကို ထောက်၍ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။